The Religion Of Peace | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on April 13, 2014
Posted in: ကိုရ်အာန်ကျမ်းဆိုသည်မှာ.	Tagged: ကိုရ်အာန်ကျမ်း, The Religion Of Peace.	Leaveacomment
ထို့ပြင်တ၀ အသင်တို့သည် ထိုကာဖိရ်မိစ္ဆာ ဒိဋ္ဌိတို့အား တွေ့ဆုံဖမ်းဆီးမိရာအရပ်၌ သုတ်သင် ရှင်းလင်း ကြကုန်လော့။
မကြာမီပင် ငါအရှင်မြတ်သည် မယုံမကြည် သွေဖည် ငြင်းပယ်သော သူတို့၏ စိတ် နှလုံးများ၌ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်ခြင်း ကိုထည့်သွင်း ပေးတော်မူအံ့ ။ သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်တို့သည် ၎င်းတို့၏ လည်ကုပ်များကို ခုတ်ဖြတ်ကြလေကုန် ။ ထိုနည်းတူစွာ အသင်တို့သည် ၎င်းတို့၏ လက်ချောင်းများ၏ အဆစ်များကို တစ်ခုစီ ဖြတ်တောက် ကြလေကုန်။
အကြင်သူတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် ထိုအရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်မြတ်၏ အမိန့်တော်များကို သွေဖည်ငြင်းဆန် ပုန်ကန်တိုက်ခိုက်ကြကုန်၏။ ၎င်းပြင် ကမ္ဘာမြေပြင်ဝယ် ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကို ပြုလုပ်ကြကုန်၏။ ထိုသူတို့၏ အပြစ်ဒဏ်သည်ကား ၎င်းတို့သည် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံကြရမည်၊ သို့မဟုတ် လက်ဝါး ကပ်တိုင်တင်ခြင်း ခံကြရမည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ခြေလက်တို့ကို လက်ယာ လက်ဝဲဘက် လွှဲ၍ ဖြတ်တောက်ခြင်း ခံကြရမည်၊ သို့မဟုတ် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း ခံကြရမည်ဖြစ်၏။ ဤသည်ကား ၎င်းတို့အား မျက်မှောက်ဘ၀၌ ကျိုးယုတ် ရှက်ရဖြစ်စေခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ၎င်းပြင် ထိုသူတို့၌ နောင်တမလွန်ဘ၀တွင်လည်း အလွန်ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ်သည် ရှိပေမည်။
စင်စစ်ဧကန် အကြင်သူတို့သည် ငါအရှင်မြတ်၏ သက်သေလက္ခဏာတော်များကို မယုံမကြည် သွေဖည်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြကုန်၏။ ငါအရှင်မြတ်သည် ထိုသူတို့အား မကြာမြင့်မီ ငရဲမီးထဲသို့ ထည့်သွင်း တော်မူအံ့။ ထိုသူတို့၏ အရေပြားများသည် ကျက်ကြေ ကျွမ်းလောင်၍သွားတိုင်း၊ ထိုသူတို့သည် ပြစ်ဒဏ်၏ အရသာကို အမြဲမပြတ်မြဲစမ်းကြရန် ငါအရှင်မြတ်သည် ၎င်းင်းတို့အား ကျွမ်းလောင်ခဲ့သော ထိုအရေပြားများ၏အစား အခြားအသစ်ဖြစ်သော အရေပြားများကို လဲလှယ်၍ပေးတော်မူအံ့။
သို့ဖြစ်ပေရာ ထူးမြတ်သောလများ ကုန်လွန် သွားသောအခါ အသင်တို့သည် ပဋိညာဉ်ကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြသော မွရ်ှရစ်က်တို့အား အသင်တို့ တွေ့လေရာနေရာများတွင် သတ်ဖြတ်ကြလေကုန်၊ ထို့ပြင် အသင်တို့သည် ၎င်းတို့အား ဖမ်းဆီးကြ လေကုန်။ ထိုမှတပါး အသင်တို့သည် ၎င်းတို့အား ချုပ်နှောင် အကျဉ်းချထားကြလေကုန်။ ၎င်းပြင် အသင်တို့သည် ထိုသူတို့အား ဖမ်းဆီးရန် ပုန်းအောင်းရာနေရာတိုင်းတွင် ပုန်းအောင်း၍ ချောင်းမြောင်းကြလေကုန်။
သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ အသင်တို့သည် အတိတ်ခေတ် ကျမ်းဂန်ရရှိသော သူတို့ကို မိမိတို့၏လက်ဖြင့် အောက်ကြို့၍ လူခွန်တော်ကို ကြည်ဖြူစွာ ဆက်သခြင်း မပြုသမျှ ကာလပတ်လုံး တိုက်ခိုက်ကြလေကုန်။ ထိုသူတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုလည်း ယုံကြည်ကြသည် မဟုတ်ပေ။ နောက်ဆုံးနေ့ကိုလည်း ယုံကြည်ကြသည် မဟုတ်ချေ။
← သိပ္ပံပညာရှင်များ ဗုဒ္ဓ၏စွယ်တော်(သွား)ကို စစ်ဆေးကြခြင်း